Tian'i India ny hanonganan'i kararine ny karana vita vaksiny
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » Tian'i India ny hanonganan'i kararine ny karana vita vaksiny
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
Ilay lalàna, izay manery ny hitokana-monina 10 andro ho an'ireo mpandeha tonga avy any India, dia mihatra amin'ny firenena maro hafa mampiasa Covishield, ao anatin'izany ny ankamaroan'ny Afrikana.
Ireo mpitsidika vita vaksiny feno avy any India dia mbola nitaky ny hametrahana quarantine 10 andro COVID-19.
Ny vaksinin'ny Covishield dia novokarin'ny Oxford University sy AstraZeneca ary novokarin'ny Serum Institute of India.
Ny britanika vita vaksiny any Angletera amin'ny jab vita vita amin'ny karana ihany dia tsy voatery hamono tena.
Nanambara i Angletera fa hampiala sasatra ny sisin'ny areti-mandringana COVID-19 ho an'ireo mpitsidika vahiny vita vaksiny tanteraka manomboka amin'ny fiandohan'ny volana manaraka.
Saingy ny lisitr'ireo firenena manana vaksiny nankatoavina dia tsy misy an'i India, na eo aza ny fampiasan'ny firenena ny kinovan'ny vaksinin'ny AstraZeneca vita any an-toerana novolavolaina tany Angletera, ary miteraka fikorontanana ara-politika sy fandrahonana valifaty valifaty ataon'ny tompon'andraikitra indianina.
Ny vaksinin'ny Covishield, novokarin'ny University Oxford sy AstraZeneca ary novokarin'ny Serum Institute of India monina any Pune, dia tsy eken'ny Fanjakana Mitambatra eo ambanin'ny fitsipika vaovao na dia mitovy amin'ny teknika amin'ny fatra omena an'ny anglisy anglisy an-tapitrisany aza.
The AstraZeneca ny vaksinina dia mandrafitra ny ankamaroan'ny fatra omena ny karana hatreto. Betsaka kokoa no naka vaksinin'ny vazimba novokarin'i Bharat Biotech, izay tsy ampiasaina any UK.
Ny minisitry ny raharaham-bahiny India dia nanentana ny manampahefana ao amin'ny governemanta anglisy mba hamaha ny “vahaolana voalohany momba ny olana momba ny quarantine” miaraka amin'ireo karana mitsidika ny Royaume-UniMbola takiana hiaina quarantine aho na dia vita vaksiny tanteraka aza.
Fitsipika fidirana vaovao, izay manan-kery tamin'ny volana oktobra, dia nahatezitra ireo karana marobe, izay nilaza fa manavakavaka ny fanapahan-kevitra. Ny britanika vita vaksiny any Angletera amin'ny jab vita vita amin'ny karana ihany dia tsy voatery hamono tena.
"Nanentana ny famahana aloha ny olan'ny quarantine ho tombontsoan'ny samy izy," hoy ny minisitry ny raharaham-bahiny Subrahmanyam Jaishankar tamin'ny bitsika iray androany taorian'ny fihaonany tamin'ny mpiara-miasa aminy britanika Liz Truss any New York, izay samy manatrika ny fivorian'ny United Nations General Assembly.
Ny hetsika nataon'i Britain dia mety hitarika valifaty avy any New Delhi ihany koa, miaraka amin'ny tompon'andraikitra iray amin'ny governemanta Indiana nilaza fa mety handray fepetra mifandimby raha tsy voavaha haingana ny olana.
"Ny olana ifotony dia ity, ity misy vaksinina - Covishield - izay vokatra manana fahazoan-dàlana avy amin'ny orinasa UK iray novokarina tany India, izay namoahanay dosie dimy tapitrisa tany UK tamin'ny fangatahan'ny governemanta," ny sekretera misahana ny raharaham-bahiny any India Harsh Vardhan Shringla hoy izy tamin'ny mpanao gazety tany New Delhi.
Miantso ny tsy fanekena an'i Covishield ho “politika manavakavaka”, nilaza izy fa efa misy ny fifampiraharahana amin'ny UK momba ireo fepetra vaovao takiana.
“Fa raha tsy mahazo fahafaham-po isika dia ao anatin'ny zonay ny mametraka fepetra mifamaly.”
Ny vaomiera anglisy britanika any New Delhi dia nilaza fa niara-niasa tamin'ny India ny UK mba hamahana ny olana.